Fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany: Ahoana no fanaparitahan'i Louis D'Amore ny viriosy?
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany: Ahoana no nanaparitahan'i Louis D'Amore ny viriosy?
Fandriampahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany: Ahoana no nanaparitahan'i Louis D'Amore ny viriosy?
Louis D'Amore dia maherifo ary natolotry izao tontolo izao fizahan-tany Network.
Lous D'Amore no filoha sy mpanorina ny International Institute for Peace Through Tourism. (IIPT)
Omaly IIPT dia nankalaza ny fahatsiarovana ny fandriam-pahalemana 35 taona tamin'ny alàlan'ny fizahan-tany. Ny sehatra dia hetsika fanombohana ho an'ny Tambajotra iraisam-pirenena fizahantany (WTN)
Mpankafy an'arivony no nijery ny hetsika tamin'ny sehatra media sosialy isan-karazany, isan'izany eTurboNews ary livestream.travel. Mpikambana WTN zato eo ho eo no nanatrika ny hetsika virtoaly. Miaraka amin'ny mpitarika be fandavan-tena be dia be amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, dia toy ny hoe tafangona izao tontolo izao.
Markly Wilson dia ny talen'ny Marketing amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany New York State. Talen'ny Marketing ho an'ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba izy teo aloha ary, nandritra ny sivy taona, mpitantana amerikana ny Birao fizahan-tany any Barbados.
Nolazainy tamin'ny mpanatrika ny fomba nanaparitahany ilay viriosy fizahantany nandritra ny taona maro. Nilaza izy fa voan'ny virus Louis d'Amore fa virus tsara io.
Louis D'Amore dia niarahaba ny WTN tamin'ny fisokafany ary nahatsapa fa matanjaka be ny fikambanana. Ny World Network Network dia natombok'ireo mpikambana ao amin'ny fananganana.travel vondrona fifanakalozan-kevitra. Nanaiky i D'Amore fa hitarika ny Peace Through Group Interest Group ao amin'ny World Tourism Network.
Ny mpikambana ao amin'ny tontonana dia samy manana ny tantarany hitaratra ny 35 taona lasa. Anisan'izany ny panelista
Dr. Taleb Rifai - Filohan'ny Birao Mpanolo-tsaina Iraisam-pirenena IIPT
Louis D'Amore, mpanorina sy filoha IIPT
Markly Wilson IIPT Filankevi-pitantanana
Diana McIntyre, Karaiba IIPT
Pike, Filoha, IIPT Aostralia
Reza Soltani, sary sy fifandraisana IIPT
Birgit Trauer, Tale mpanorina, The Cultural Angle
Fabio Carbone, masoivohon'i IIPT ao Large sy ny filoha, IIPT Iran
Juergen Steinmetz, filoha World Network Network
Ny fitsangantsanganana an-dranomasina Xisha dia miverina any amin'ny Ranomasin'i South China